Kuxwayiswa umphakathi ngezinyoka | Isolezwe
Kuxwayiswa umphakathi ngezinyoka
Isolezwe / 14 January 2013, 2:53pm /
ISIBHEDLELA sakwaHlabisa sesixwayise umphakathi waseMpembeni namaphethelo ukuthi uhambe uqaphele kulandela isigameko sowesilisa wakule ndawo oshaywe imamba emnyama.
Yize esindile uMnuz Makhosonke Thusi (36), kodwa okhulumela lesi sibhedlela uMnuz Themba Shange udonse lo mphakathi ngendlebe ukuthi njengoba useduzane kwesiqiwi futhi kunamahlathi axakile kulezi zindawo, kumele uhambe uqaphile njengoba izinyoka zibhokile ikakhulukazi njengoba kusehlobo.
“Abantu kuzona zonke izindawo siyabanxusa ukuthi baqaphele uma behamba emahlathini ngoba izinyoka eziningi zibhokile, ikakhulukazi lezi eziyingozi njengayo imamba. Lokhu kudalwa ukuthi kunamahlathi ayingozi kanti nesiqiwi siseduzane.
Uthe okunye ukuthi abantu abanawo amanzi ngakho baze baphoqeleke ukuthi bayowafuna emithonjeni okuyilapho bethola khona ukulimala.
UThusi uthe ube ngowokuqala ukuthi bamlaphe asinde bangaze bamdlulisele kwezinye izibhedlela futhi angashoni.
Echaza ngalesi sigameko esenzeke ngoLwesine, uthe uThusi wayeyohlanza umthombo kule ndawo ngesikhathi evukelwa ilenyoka enobuthi obuyingozi.
“UThusi uthi yamvukela enganakile imamba yase imshaya njengoba kuyinyoka eshesha ngendlela eyisimanga. Into enzima ukuthi abantu abaningi bayazi ukuthi ikhona le mamba kodwa basahamba kule ndlela yize kuvela ukuthi isiziqedile izimbuzi,” kusho uShange.
Eqhubeka uShange uthe izigameko zokungeniswa kwabantu esibhedlela ngenxa yokushaywa inyoka into abayijwayele ikakhulu kule ndawo.
“Yize ngingazi ukuthi bangaki kodwa baningi abafika beshaywe inyoka, kodwa kuyaqala ngqa ukuthi kusinde umuntu oshaywe imamba kulesi sibhedlela, akujwayelekile nhlobo,” kusho uShange.
Ube esenxusa umphakathi ukuthi ungazisebenzisi isibiba uma usushaywe inyoka ngoba kwenza kube nzima ukuthi imishini yasesibhedlela ikwazi ukumpompa noma ukulwa nobuthi benyoka uma isibiba sesisegazini.
“Ukudla isibiba ngenye yezinto ebulala abantu ngoba omunye umosha isikhathi esiningi eyokhotha izibiba uma isimshayile esikhundleni sokuthi aqonde esibhedlela. Abantu siyabanxusa ukuthi bangazizingeli izinyoka njengoba kuwumkhuba ovamile kule ndawo, kuyingozi enkulu lokho,” kuphetha uShange.
Kwenzeka lokhu nje naseNdwedwe kwatholakala owesifazane, uNksz Thobekile Khuzwayo esedindilizile ehlathini okusolakala ukuthi washaywa iyona imamba emnyama.